RN2 : Trafikana lavanila manta, MD avokoa ireo olona efatra - Midi Madagasikara
DomicileFaits-DiversRN2 : Trafikana lavanila manta, MD avokoa ireo olona efatra
RN2 : Trafikana lavanila manta, MD avokoa ireo olona efatra
Ny alatsinainy lasa teo no natolotra teny anivon’ny Fampanoavana tetsy Anosy ireo olona efatra voarohirohy tamin’ny resaka trafika lavanila manta, tamin’iny lalam-pirenana faharoa iny. Trafika izay ravan’ny zandary teo amin’ny barazy, teo Carion, ny zoma lasa teo.
Ny mpandefa ny entana, ny olona roa mpamilin’ireo fiara nitondra ireo lavanila manta ireto ary vehivavy iray, nitetika ny handray izany entana izany taty an-drenivohitra. Ireo, ireo olona efatra voasambotry ny zandary, taorian’ny fanadihadiana nataon’izy ireo. Raha tsiahivina kely moa ny tranga, ny andron’ny zoma lasa teo, teo anatin’ny sakana, izay notanterahan’ireo zandary tetsy Carion, ary hisavana ireo fiara rehetra mitondra entana avy amin’iny lalam-pirenena faharoa, dia tra-tehaka tamin’izany ny fiara iray, nitondra gony feno lavanila manta. Nezahiny nafenina mafy moa izy ireo ary nolazaina ihany koa fa gonim-bary. Araka ny baiko azon’ireto zandary ireto avy amin’ny mpifehy azy ireo mivantana, ny eo anivon’ny vondron-tobim-paritra Imerina Central, dia tsy maintsy atao ny fisavàna hatramin’ny faran’ny kely indrindra. Araka izany tsy nionona tamin’ny filazàna ireo zandary fa nisava, ka tra-tehaka teo ireto « volamena maitso » ireto. Entana, izay tsy nisy taratasy na dia iray aza niaraka tamin’izany. Etsy andanin’izay, efa nisy ihany koa ny lalana izay mandratra ny fiotazana izany lavanila izany tsy ao anatin’ny fotoana voarafaritry ny lalàna.
Nosamborina teo no eo ihany ny mpamilin’izany fiara izay ary nogiazana ireto entana ireto. Nanaovana velam-pandrika kosa ny olona voalaza fa saika haka izany, satria araka ny nambaran’ny mpamily dia « commission » avy any Mahanoro ireo entana ireo. Tsy ela ihany koa araka izany dia voasambotra ny mpandray ilay entana, tetsy Ampasampito. Tamin’io fotoana io ihany koa anefa dia efa nisy lavanila maitso hafa tonga, nentin’ny fiara hafa ary mbola io ramatoa io ihany no mpandray azy. Milanja teo amin’ny antsasa-taonina latsaka kely teo araka izany (444 kilao) ny tontalin’ireto entana sarona ireto. Rehefa nandeha moa ny famotorana isan-karazany dia nosamborina tany Mahanoro ihany koa ny lehilahy iray, nandefa ireto lavanila tsy mbola matoy ireto. Ireto niaraka natolotra teny anivon’ny Fampanoavana afak’omaly ireto avokoa moa izy ireo. Fadikan-dalàna maromaro moa no nanenjehana ireto olona efatra ireto. Ankoatry ny fiotazana lavanila tsy matoy dia heverina fa tafiditra ao anatin’ny resaka halatra lavanila ihany izy ireo, izay heloka bevava eo anatrehan’ny lalàna.